भोकको कथाः माग्नु मेरो बाध्यता होइन, विकल्प हो - Everest Talk
भोकको कथाः माग्नु मेरो बाध्यता होइन, विकल्प हो1 min read
मान्छेलाई कसैलाई सहारा दिएन भने सडकले दिन्छ । यही सडकमा अनेकौ कथा भेटिन सक्छ ।
२०७६, ७ पुष सोमबार १०:१३
बिहानको सिरेटोले गाला छोएर जान्छ । चर्को हर्नले नखुलेका मेरा आँखा एक मुठ्ठी हावाले भत्काइदिन्छ । चिसो हावासँग लड्ने एउटा बोराले कति नै पो काम गरोस् ? कहिले त्यो बोरा बोतलले भरिन्छ त कहिले त्यही बोराले पानीका थोपा छेक्न खोज्छन् । र, हार्छन् । मलाई जिताउन खोजेर पनि हारेको बोरा मलाई औधी मन पर्छ । यही एक त छ मेरो गाँस बाँस र कपासको एकमात्र भर ।
मैले सडकमा भोको पेट बोकर जीवन मागेको कत्ति भयो ? मलाइ यकिन छैन । तर सडकमै भोकको जीवन माग्दामाग्दै मेरो जीवन सकिने बेला आउँछ, यो भने हुनथालेको छ मलाई ।
म कस्तो अवस्थामा छु, त्यो सहजै देखिन्छ । आँखाले नै देखेपछि मैले छलेको छु भन्न मिल्दैन । कतै मैले सुनेको थिएँ, यस संसारमा देखेको कुरालाई झन् धेरै विश्वास गरिन्छ रे ।
म बुझ्दैछु, मान्छेहरू भोकका लागि कत्तिसम्म गर्छन् ? के केसम्म गर्छन् ? तर, मैले जीवनमा यो कहिल्यै सोचिनँ कि एकदिन मेरो जिन्दगीको अन्तिम लक्ष्य एक छाक खान पाउनु मात्र बन्नेछ ।
आजकाल आफैँलाइै हेर्छु, आफ्नै विगततर्फको संसारमा सयर गर्न निक्लिन्छु । आफूलाई हेर्दा पो थाहा पाइने रहेछ, यो सहरमा मानवताको खोला कसरी र कुन दिशामा बगेको छ ।
आफन्तहरू मेरा सम्झनामा नआउने पनि होइनन् । आउँछन्, कहिले म रुँदा आँसुमा मिसिएर आउँछन् त कहिले म हाँस्दा नक्कली हाँसो बनेर ओठमा छाउँछन् । ओठ हाँस्नु र मन हाँस्नु बिल्कुलै फरक कुरो हो रहेछ । हो, मैले आफैँलाई गुमाएको दिनबाट आफन्तहरू गुमाएको हुँ ।
देख्न त मेरो आँखाहरूले पनि देख्छन् होटलका महंगा खानेकुराहरू । ती खानेकुराका अनेक परिकारहरू आँखाले नै किन्छन् र आँखाले नै खान्छन् । हात र आँखाको दूरी बहुत दूरको रहेछ । मेरा हातले किन्ने भनेको त सबैभन्दा सस्तो चीज हो ।
मान्छेले जीवनमा केही गर्न सकेन भने आस गर्छ । म आजकाल सडकको फुटपातमा जीवन ओछ्याएर भोकको आस गर्छु । जिन्दगीले कहिले कुन मोडमा मान्छेलाई पुर्याउँछ थाहा हुन्न रहेछ ।
बाटोमा कुनै एक बाउले छोराछोरीको हात समाएर हिँडेको देख्दा मलाई पनि बाउ बन्नुको रहर जागेर आउँछ । कुनै बच्चाले मेरो अनुहारमा एकटक हेर्यो भने मलाई उसले किन हेरेको होला सोध्न मन लाग्छ । तर, मान्छेसँग दिलको कुरा गर्न मान्छेमात्र भएर नपुग्ने रहेछ ।
मेरो छेवैमा अन्य मैजस्ता माग्नेहरू बस्छन् । उनीहरू नै मेरा आफन्त बनेका छन्, धेरै समयअघि देखि । तर, कहिलेकाहीँ म एक्लै हुन्छु । यहाँ भीख माग्नेको पनि आफ्नै पीडा छ । आफ्नै कथा छ । आफ्नो बाध्यता छ ।
कति घरबाट निकालिए, र उनीहरूले सडकलाई अपनाए । कतिलाई भाग्यले ठग्यो, र सहारा यही सडक बन्यो । कतिलाई आफ्नै शरीरले पराई सम्झियो, र सडकले आफन्त मान्यो । यस्तै अनेक कथाहरूले सज्जिएको छ मेरो धरातल । मेरो सडक ।
छिःछि र दुरःदुर गर्नेहरू पनि यहीँ सडक भएर हिँड्छन् । सहयोगी हातहरू पनि यतै छन्, जो खुल्ला हृदय बोकेर सडकलाई सुम्सुम्याइरहन्छन् । लाग्छ, म अरुकै सहयोगका खाँतिर बाँचेको हुँ । तर यतिका मान्छेचाहिँ किन बाँचेका होलान् ?
बिहानै सडकमा माग्न आइपुग्दा म यही सोच्छु कि आज मैले कुन बेला खान पाउँछु । भने नि, खान पाउनु जीवनको अन्तिम लक्ष्य बनेको छ ।
कुनै बेला म भोकै सुतेको कथा यो सडकले नै सुनेको छ । जमेको पानी पिएको कथा यही सडकले देखेको छ । म आफैँलाई छलेर रुन्न भन्दाभन्दै रोएको कथा, त्यो नीलो पुलले सयौँपटक देखेको छ । म आफैँलाई रुन मन लाग्दैन, तर आँखालाई कसले रोक्न सक्छ र
कहिले दिनभरको घाम सहेर आफूलाई पाल्छु, कहिले दिनभरको झरीमा आफैँलाई भिजाउँछु र पेटलाई पाल्छु । र, म पानी पर्दा अझ बढी रुन्छु, िमलाई थाहा छ कि झरीमा रोएको कसैले याद गर्दैन । यदि पेटको सवाल नआउँदो हो त सडकको आधा व्याथा घट्थ्यो होला ।
त्यसो त अरुबेला नै रोए पनि माग्नेको आँसुको कसलाई पो वास्ता ? यो भागदौडको सडकमा । तापनि रुनेलाई भने आफ्नो आँसु कसैले नदेखोस्झैँ लाग्दो रहेछ ।
भन्छन्, संगीतले मान्छेको पीडालाई भुलाउँछ । मलाई पनि हो जस्तो लाग्छ । कचौरामा कसैले सिक्का खसाउँदा आउने संगीत मलाई सबैभन्दा प्रिय लाग्छ । जसले मेरो भोकको दुःखाईलाई मलम लगाइदिन्छ । र, मलाई कसैले मतिर हैर्दैै मुस्कुराएको पनि प्रिय नै लाग्छ ।
मैले माथि नै भनेको छु, म यो मोडमा आइपुग्छु भनेर जीवनको कुनै कालखण्डमा पनि सोच्न सकेको थिइनँ । तर, किन कसरी आएँ । विगतका पाना पल्टाउने हो भने आज म तपार्इँहरूलाई आफ्नो पीडा यसरी बताइरहन पनि त पाउने थिइनँ ।
न बिर्से तिमीलाई न पाएँ तिमीलाई
बिना अर्थ दिलमा सजाएँ तिमीलाई
माया लागेर आउँछ
मरेर के पो लानु छ
यी गीतहरू मेरो स्वर दिनभर गाइरहने गीत हुन् । मलाई लाग्छ, मान्छे यो संसारमा डराएर बाँचेको छ । मान्छे डराउनु पर्ने आफैँसँग हो, तर ऊ धेरै भगवानसँग डराउँछ । त्यसैले कतै धर्मको निहुँमा ऊ आफ्नो पाप पखाल्न खोज्छ । यो कचौरामा खसेका धेरै सिक्का भगवानलाई खुसी बनाउन खसालिएका हुन् । यहाँ मान्छेले मान्छेलाई मानवताभन्दा पनि मरेपछि भगवानको घरमा इमान्दार बन्न केहीहदसम्म यही धरतीमा तयारी गर्दछ ।
माग्नु मान्छेको रहर होइन । बाध्यता त झन् हुँदैहोइन । तर माग्नु मान्छेको विकल्प हो ।
सबेरै माइकको ब्याट्री चेक गरेर निस्कने बेलामा सोच्छु, आज सडकमा धेरै मान्छेहरू हिँडून् । मान्छे धेरै हिँडे भने मात्र गीत सुनाउ सक्छु । सुनसान ठाउँमा त मेरो भोकको मलाई बाहेक कसैलाई वास्ता हुँदैन ।
दिनभर सडकमा गीत गाउँदा गीत लेख्नेलाई सम्झन्छु । सङ्गीत भर्ने र गाउनेलाई सम्झन्छु । धन्यवाद भन्न मन लाग्छ । उनीहरू नभएको भए मेरो छोरालाई मैले भन्न सक्ने कुनै शब्द हुँदैन थियो सायद ।
भाग्यले ठगे पनि मलाई स्वरले ठगेन, यसैमा खुसी छु । मन हुनेले कचौरामा सहयोग दिनुहुन्छ, कतिले गीत सुन्नुहुन्छ । यसरी नै दिनहुँ सडकसँगको वार्तालापले मलाई नयाँ जोस दिन्छ । बिहानै उठेर सडकमा पुगेर मलाई देशको गीत गाउन मन लाग्छ । तर अभावहरूले मलाई पेटको बारे प्रश्न गर्छन् ।
Tags: भोकको कथामाग्नेसडक